ဂျပန်နှင့်တရုတ်အနေဖြင့်ကိုရီးယားဇာတ်ကောင်များအကြားခွဲခြားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Это очень просто. В корейском языке не иероглифы, а алфавит, просто буквы похожи на по начертанию на китайские иероглифы, но этих букв-quot;иероглифовquot; мало и они часто повторяются в тексте. Т.е. в корейском языке один знак — один звук.
ဂျပန်တစ်ဦးရောနှောစနစ်တွင်: syllables နှင့်တပြင်လုံးကိုဤစကားသည်အစဉ်အလာစာလုံးများ, တစ်ဦးချင်းစီအသံရည်ညွှန်းဖို့ရှိသည်, အဆုံးစွန်သောမကြာခဏထပ်တလဲလဲနှင့်ရိုးရာအက္ခရာမှပိုမိုနီးကပ်စွာအကြမ်းဖျင်း, ရိုးရှင်းသောနေကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, အစဉ်မပြတ်ငါ (90 ကိန်းဂဏန်း counterclockwise9ဒီဂရီအားဖြင့်လှည့်တစ်ဦးကဲ့သို့) လက်ဝဲဘက်ဒုတိယကော်လံအတွက်ဆဌမဇာတ်ကောင်ရဲ့ထိပ်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်
Китайское иероглифическое письмо наиболее сложное — там масса уникальных иероглифов, многие из которых заменяют целые слова, а сама quot;конструкцияquot; иероглифа затейливая, с массой деталей.
ကိုရီးယား script ကိုစက်ဝိုင်းနှင့်ဘဲဥပုံတွေအများကြီး။ တရုတ်နှင့်ဂျပန်အဘယ်သူအားမျှရှိပါသည်။ ရဲ့ကြီးမားတဲ့နမူနာကြည့်ကြရအောင်။
Это — автобус из Сеула. Видите округлые элементы в иероглифах? А ещ в корейских иероглифах много простых прямых горизонтальных и вертикальных линий.
တရုတ်။ မတူညီတဲ့ထောင့်မှာပါစီစဉ်ပေးဖြောင့်လိုင်းများနှင့်ခါးဆစ်၏ရှုပ်ထွေး ligature ။ ရုပ်စာအတွက်စက်ဝိုင်းမဟုတ်။
ဂျပန်စာလုံးများကိုတရုတ်ထံမှချေးနှင့်သူတို့ခွဲခြားရန်နိုင်အောင်လွယ်ကူသောမရှိကြပေ။ Esze ဂျပန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း, ထိုနာမကိုအမှီ Quote အောက်မှာသူတို့ထဲကတဦးတည်းရှိ၏ hiraganaquot; အများအပြားပြရန်နှင့်ကွင်း, ဒါပေမယ့်စက်ဝိုင်းနှင့်ဘဲဥပုံအမျိုးမျိုးကသူတို့ရဲ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်သူတို့အားသို့မဟုတ်အခြားဇာတ်ကောင်အတွက်ရေးထိုးကြောင်း, နေရောင်ရှိတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ဂျပန်ဖြစ်ပါတယ်။ အခွားသောသင်ရိုးညွှန်းတမ်း, Quote; katakanaquot; ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားနှင့်မတူဘဲကွဲပြားခြားနားသောထောင့်မှာလိုင်းများ။ Krugleshki ပျက်ကွက်။
ကောင်းပြီ, မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုတိုးချဲ့၏မျက်နှာကို ထောက်. ဥပမာ၏စုံတွဲတစ်တွဲ esch ။
ပုံမှန်ထိုင်းနိုင်ငံ။ အကြီးအကဲများနှင့်အတူမြွေနဲ့တူထိုင်းအက္ခရာစာလုံးများကို။ မြွေ၏ဦးခေါင်းကိုအဘို့မထားလျှင်, ကဟီဘရူးအက္ခရာနဲ့ဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွင်ကဖြစ်ပါသည်:
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,497 စက္ကန့်ကျော် Generate ။